Betting Probability Calculator: esi gbakọọ ezigbo nsogbu nke mmeri n'ịntanetị
Kedu uru ị chere na ọ bụ maka obere akpa gị gbakọọ ihe ga-eme ka mmadụ merie gị online?
M ga-ekwu na ọ bụ isi na ngwanrọ Betting Probability Calculator ọ dị mma maka egwuregwu ọ bụla, ebe ọ bụ ihe mgbakọ na mwepu ọnụ ọgụgụ, ekele nke ọ ga-ekwe omume iji gbakọọ ndị eze Ohere ọnụ ọgụgụ na ihe omume nke ị nwere ike ịbụ na ị kwara ego, nwere ike ime.
Na-agụta nsogbu nke mmeri: ntinye data
Jiri Betting Probability Calculator ọ dị mfe ma kensinammuo, ị ga - abanye igbe mbụ na elu Omume P% pasent nke ihe omume (nke anyị ga-alaghachi n'oge na-adịghị anya) na mpaghara abụọ ndị ọzọ (Na akụ na Tranche) ugboro ole ka ị meriri (Hits) ma ọ bụ kama, ugboro ole ka ịchọrọ ịchọpụta na ọ ga-ekwe omume imeri na ọnụọgụ nke n, ọnụọgụ ị ga-abanye na igbe ahụ Mgbanwe.
N'ọhịa anwale ị ga - aba ugboro ole ị chọrọ ka onye mgbako gị ịrụ ule na ịpị igodo Gbakọọ ị ga-enwe sortie pasent nke ihe omume a.
Gbakọọ nsogbu nke mmeri: eihe atụ nke ngụkọta oge
Ka anyị nye ihe atụ ozugbo iji gbakọọ nke gi Ohere merie: nke mbụ niile banyere ihe gbasara nke puru omume ị ga-abanye, dị ka ekwuola n'elu, pasent nke ihe omume ị chọrọ nyochaa.
Ọ bụrụ na ị na-egwu roulette, banye na pasent nke agbakọtara site na ịkekọrịta ọnụọgụ nke mejupụtara ohere ịchọrọ iji nyochaa site na 37 (French roulette) ma ọ bụ 38 (American roulette efu abụọ).
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enyocha a dị mfe ohere dị ka-acha ọbara ọbara / nwa ma ọ bụ ọbụna / iberibe, dị nnọọ na a nkịtị mgbako do 18 kewara ekewa na 37 ma mụbaa nsonaazụ site na 100.
Ga-aba uru a na akpa ubi Omume P% (ihe gbasara nke puru omume).
Gbakọọ ọnụọgụ abụọ maka French roulette
Ohere di mfe: 18/37 = 0,4865 * 100 = 48,65;
Iri na abuo / Ogidi: 12/37 = 0,3243 * 100 = 32,43;
Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, ịchọrọ ịlele ihe omume ịkụ nzọ egwuregwu, ị ga-ebu ụzọ gbanwee ọghọm ahụ gaa na pacenti.
Iji mee nke a, nchịkọta dị mfe ga-ezu: 1 kewara ihe ọghọm ma mụbaa nsonaazụ site na 100.
Ihe atụ nke ntughari maka nsogbu egwuregwu
Nsogbu = 2,00: 1/2 = 0,50 * 100 = 50;
Nsogbu = 2,75: 1/2,75 = 0,3636 * 100 = 36,36;
Nsogbu = 3,50: 1 / 3,50 = 0,2857 * 100 = 28,57.
Banyere ịkụ nzọ, kpachara anya, n'ihi na nsogbu ị na-ahụ na onye na-ede akwụkwọ na-agụnyekarị ego, yabụ, a ga-ehichapụ ụtụ a nke ụtụ akwụkwọ ahụ na-etinye, ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dabere na ụdị nyocha ịchọrọ ịme.
Na mpaghara Hits, dịka e kwuru na mbụ, ị ga-abanye ọnụ ọgụgụ nke mmeri meriri na Tranche ga-abụ ogologo oge ule ọ bụla ịchọrọ ịme.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara, gbasara acha uhie uhie na oji na roulette, kedụ ihe puru omume enwere na ọnụọgụ nke 100 iji merie 50, banye na 48,65 na igbe mbụ (ihe gbasara puru iche nke uhie / ojii) , 50 na mpaghara Hits na 100 na mpaghara Tranche.
Ozugbo a pịa bọtịnụ ahụ Gbakọọ ị ga-amata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo na ihe gbasara nke puru omume bụ ihe dịka 43%.
O doro anya na ị ga-enwere onwe gị ịme ule niile ịchọrọ na ụkpụrụ ndị ọzọ.
Na-atụle nsogbu nke mmeri: lmkpa nke nsonaazụ
Ma olee uru ịmara percentages ndị a?
Betting Probability Calculator Ọ ga-aba uru dị ukwuu maka ebumnuche dị iche iche: ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ịtọgharị mgbagharị ma mara ole ị ga-atụ anya na 177% si na 100 strok (tranches), naanị mee ule ụfọdụ site na iche ụkpụrụ na 'Hits' ma ị gha enweta azịza ya!
Ma ọ bụ, usoro ịkụ nzọ egwuregwu na-emeri gị 634 otu nzo (Hits) nke 1.345 (Tranche) na nkezi nsogbu 2,25 (Omume P% iji gbanwee dị ka akọwara n'elu), kedu nsogbu nke nke a na-eme?
O doro anya ma ọ bụrụ na nsonaazụ ya bụ 0% enwere ozi ọma: usoro nhọpụta gị meriri ndị na-ere akwụkwọ!
Nbudata Nbudata	BPCalc.zip - 2 MB